यति र बुद्ध एयरले लुट्नु लुटेपछि भाँडा घटाएको नाटक मञ्चन - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com यति र बुद्ध एयरले लुट्नु लुटेपछि भाँडा घटाएको नाटक मञ्चन - Aathikbazarnews.com
नेपालमा नाम कमाएका, नाफा कमाएका यति एयर र बुद्ध एयरले १ हप्ता भाडामा लुट मात्रै मच्चाएनन् । देशको सम्बेदनशील अवस्थाको उपभोग गरे भन्दा अब फरक पर्दैन ।
विश्यव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरससंग जनता लडिरहेका परिस्थितिमा यति र बुद्ध एयरले रातारात भाडाँमा लुट नै मच्चाएको खुलेको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस देखा नपरे पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै कुरा बन्द गरेपछि राजधानी छाडेर घर जानेहरुको भीड बढेपछि यसकोे फाइदा यति र बुद्ध एयरले उठाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
विश्व रोएको बेला नेपालले कोरोना नभित्र्याउन सयौं उपाय खोजी गरेको बेला जनतालाई सहयोग र साथ दिनुको साटो भाडामा लुट मच्चाउने यति र बुद्ध एयरलाई कारबाही मात्रै होइन । लाईसेन्स नै खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
४ हजारको भाडालाई ९ हजारसम्म लिने र विरोध भएपछि कारवाहीको डरले घटाएको नाटक मञ्चन गर्ने यति र बुद्ध एयरलाई राज्यले तत्कालै कडा कारवाही गरिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
यति सम्मकी यती एयरले काठमाडौं–भद्रपुरको भाडा ९ हजार लिएर लुट नै मच्चाएको खुलेको छ । जबकी त्यहाको भाडा ६ हजार भन्दा बढि पर्दैन । यो कस्तो लुट हो । राज्य कहाँ छ । किन कारवाही गर्दैन । यति एयरलाई के यो देश यति एयरकै हो ? ३ करोड जनताको देश होइन ?
१ हप्ता यी दुई यति र बुद्ध एयरले डबल भाडा उठाएर लुटेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को बिरोध भएपछि भाडाँ घटाएको नाटक मञ्चन गरेपनि भाडाँ घटेको छैन । टिकट ब्लाकमा नै बिक्री भएको भेटिएको छ ।
जनतालाई दुःखपर्दा लुट्ने । देशले सहयोग मागिरहेको बेला मुन्टो उता फर्काउने यस्ता एयरलाइन्स नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन । दशैं, तिहार जस्तै गरि लुट मच्चाउने यि दुई यति र बुद्ध एयरलाई तत्कालै कडा भन्दा कडा कारवाही गरि चेतावनी मात्रै होइन जरिवाना गर्न सरकार अब पछि पर्नु हुँदैन । नत्र जनताले नै कारवाही नर्गलान भन्न सकिदैन । सचेत भया ।
माछापुच्छ्रे बैंकका एकै साथ ४ नयाँ शाखा र १२ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा